Virtualization amin'ny Debian: Fampidirana - Tambajotra informatika ho an'ny SME | Avy amin'ny Linux
Virtualization amin'ny Debian: Fampidirana - Tambajotra informatika ho an'ny SMB
phico | | GNU / Linux, Tutorials / Manuals / Tips
1 Ny tsotra indrindra no tsara indrindra
3 Famaritana sy rohy arakaraka ny Wikipedia sy loharano hafa
3.2 Masinina virtoaly
3.4 Open Virtualization Alliance (OVA)
3.7 Linux Containers LXC
4 Rohy mahaliana hafa
5 Fanaterana manaraka?
Ny tsotra indrindra no tsara indrindra
Ao amin'ny sary lohatenin'ny pejy lehibe an'ny XtratuM, Hypervisor natao manokana ho an'ny Embedded na Embedded Systems amin'ny fotoana tena izy, hitantsika ity sary manaraka ity:
"Ny Fitsipika fototra ho an'ny fametrahana, fikirakirana ary fitantanana serivisy, ao anatin'izany ny Mazava ho azy fa Virtualization, dia manaiky tanteraka ny hafatra «Ny tsotra, ny tsara kokoa", izany hoe, Ny tsotra indrindra no tsara indrindra. "
La Virtualization lohahevitra midadasika sy sarotra io. Tsy hanoratra betsaka momba azy izahay. Ny famaritana sy rohy mankany amin'ny pejy izay soso-kevitray dia tsy maintsy havoitray sy / na hianarana, araka ny fahalianan'ny mpamaky tsirairay. Manoro hevitra izahay mamaky pejy an'ny Wikipedia amin'ny teny anglisy, ary avy amin'ny loharano hafa.
Izahay dia tsy te-hiditra amin'ny fandefasana mahazatra How To amin'ny baiko maro, sns., Raha tsy manome torolàlana fampidirana aloha farafaharatsiny momba izany. Fantatsika fa ny sasany Mpamaky tsy manam-paharetana Tsy vakian'izy ireo ny fampidiran-dresaka ary mandeha mivantana amin'ny fomba nanatanterahana izany. Hetsika mampalahelo satria, taty aoriana dia tonga ireo fanontaniana mifono hevitra izay matetika tsy haintsika valiana tsara, satria tsy afaka ny hahalala ny zava-drehetra isika.
Manantena izahay fa, rehefa avy namaky tamim-pitandremana na dia kely aza ity lahatsoratra ity, dia hanana hevitra momba izany ny mpamaky Virtualization ary an'ny azy Toe-javatra ankehitriny. Ary koa, manana andiana rohy izay mamela anao hanitatra bebe kokoa amin'ity asa isan'andro ity ho an'ny olona rehetra izay mampiasa solosaina amin'izao fotoana izao.
Famaritana sy rohy arakaraka ny Wikipedia sy loharano hafa
Amin'ny siansa informatika, Virtualization dia manondro ny asa famoronana ny kinova an'ny zavatra virtoaly fa tsy zavatra tena izy, izay misy ny fitaovana informatika virtoaly, miasa rafitra, fitaovana fitahirizanaary loharanom-pahalalana amin'ny solosaina. Natomboka tamin'ny taona 60 ny virtualisation, ho toy ny fomba iray mizarazara ny haren'ny rafitra a mainframe solosaina, eo anelanelan'ny fampiharana samihafa. Nanomboka teo, ny dikan'ilay teny Virtualization tsy mitsaha-mitatra io.
La Virtualization o Sehatra virtoaly dia manondro ny famoronana masinina virtoaly, izay miasa toy ny tena izy, miaraka amin'ny rafitra miasa. Ny rindrambaiko mandeha amin'ny milina virtoaly dia tsy mitovy amin'ireo fitaovana entina miasa na loharanon-karena. Ohatra: milina ara-batana mihazakazaka Debian 8 "Jessie" dia afaka mampiantrano milina virtoaly miaraka amin'ny rafitra fiasa Ubuntu Trusty 14.04.
Amin'ny Virtualization dia antsoina hoe «Host - Host»Ho an'ny solosaina tena izy na ara-batana izay misy ny virtualisation. ny milina virtoaly Antsoina hoe "Vahiny - Guest«. Ireo teny Host y Guest ampiasaina hanavahana ny rindrambaiko mandeha amin'ny milina tena izy sy ny rindrambaiko mandeha amin'ny milina virtoaly. Amin'ny lozisialy na mikirao praogramanao izay mamorona ny milina virtoaly amin'ny hardware Host, antsoina izany Hypervisor - Hypervisor.
Karazana virtualisation samihafa:
Virtualization tanteraka - Virtualization tanteraka: Enti-milaza ny Saika simika Hardware tanteraka, izay mamela ny rindrambaiko virtoaly - mazàna misy rafitra fandidiana - mihazakazaka tsy misy fanovana.
Virtualization ampahany - Virtualization ampahany: ny tontolo iainana kendrena Tsy simulate tanteraka izy io, fa ampahany. Vokatr'izany, ny programa sasany mihazakazaka amin'ny Vahiny dia mety mila fanovana.
Paravirtualization - Fanatsarana ara-paritra: Tsy misy tontolon'ny fitaovana entina simika. Program ho an'ny vahiny - Guest mihazakazaka a Isolated Domain, toy ny hoe mihazakazaka amin'ny rafitra samihafa izy ireo. Ny fanovana manokana ny programa ho an'ny vahiny dia ilaina amin'ny fampiharana azy amin'ity karazana tontolo iainana ity.
La fitaovana enti-miasa virtualization io dia fomba iray hanatsarana ny fahombiazan'ny fizotran'ny virtualization amin'ny ankapobeny. Midika izany fa ny processeur na ny CPU dia tsy maintsy manana ny fanohanana ilaina amin'ny virtualization, ary koa ny singa hafa amin'ny hardware.
Ny Hardware Virtualization dia tsy mitovy amin'ny fanahafana ny Hardware. Ao amin'ny fanahafana, ny ampahany iray amin'ireo fitaovana dia maka tahaka ny iray hafa, raha amin'ny Virtualization kosa, ny Hypervisor - izay rindrambaiko- dia maka tahaka fitaovana iray manokana na manontolo.
Amin'ny computing, a milina virtoaly Izy io dia rindrambaiko mamolavola solosaina ary afaka mandefa programa toa ny tena solosaina tena izy. Ity rindrambaiko ity dia nofaritana tamin'ny voalohany ho "kopia masinina ara-batana mahomby sy mitokana." Amin'izao fotoana izao, ny dikan'io teny io dia ahitana milina virtoaly izay tsy misy fitoviana mivantana amin'ireo fitaovana enti-miasa tena izy.
Un Hypervisor - Hypervisor o Fanaraha-maso ny milina virtoaly - Fanaraha-maso ny milina virtoaly VMM dia sehatra iray mamela ny fampiharana teknika fanaraha-maso virtualization samihafa hampiasa, miaraka amin'izay koa, ny rafitra fandidiana samihafa (tsy novaina, na novaina toy ny amin'ny tranga paravirtualization) amin'ny solosaina iray ihany.
La Sokafy ny Virtualization Alliance, manaja ny lohateny amin'ny teny anglisy, dia Tetikasa iaraha-miasa amin'ny Linux Foundation izy io. Ity Consortium ity dia manolo-tena amin'ny fananganana rindrambaiko maimaim-poana sy lozisialy misokatra - Open Source ho an'ny vahaolana virtualization ao anatin'izany KVM, ary koa ho an'ny rindrambaiko ilaina amin'ny fitantanana azy, toa ny oVirt. Ny Consortium dia mampiroborobo ny tantaran'ny fahombiazan'ny mpanjifa samihafa, mamporisika ny fiaraha-miasa ary manafaingana ny fanitarana ny tontolo iainana ny vahaolana avy amin'ny antoko fahatelo, manodidina ny KVM.
Rindrambaiko maimaim-poana atolotry ny OVA:
KVM dia hypervisor. Noforonin'i Qumranet, Inc., orinasan-rindrambaiko israeliana izay nanintona be ny saina tamin'izany fotoana izany ho amin'ny fanekena haingana ny modely KVM tafiditra ao anaty kernel Linux. Nanolotra ny «Sehatra virtualization birao ICE matanjaka»Miorina amin'ireo masinina birao birao Kernel monina ao Kernel, ary mifamatotra amin'ny alàlan'ny protokolony zava-manitra. Tamin'ny 4 septambra 2008 ny orinasa Red Hat, Inc. nahazo Qumranet amin'ny sandan'ny $ 107 tapitrisa.
oVirt dia lozisialy fitantanana sehatra virtoaly. Rindrambaiko loharano malalaka sy malalaka io. Izy io dia natsangan'ny Red Hat ho toy ny tetik'asa eo amin'ny fiaraha-monina izay Redization amin'ny orinasa Hat Hat. oVirt dia mamela ny fitantanana afovoany ny milina virtoaly, loharanom-pahalalana, fitahirizana ary ny compute, avy amina tranokala mora ampiasaina, miaraka amina sehatra tsy miankina hiditra ao aminy. Ny Hypervisor tokana dia tohana amin'ny fomba ofisialy amin'ny maritrano X86 64 dia ny KVM, na dia ezahina atao aza ny manohana ireo maritrano PPC y ARM amin'ny kinova manaraka.
libguestfs dia tranomboky voasoratra ao fiteny C ary andiana fitaovana hidirana sy hanovana ny sary kapila virtoaly amin'ny sehatra virtualization. Ireo fitaovana dia azo ampiasaina amin'ny fijerena sy fanovana ireo milina virtoaly tantanan'ny libvirt sy ireo rakitra ao aminy. Azo ampiasaina amin'ny fanoratana script -scripting- izay manova na mamorona milina virtoaly.
Virtual Machines Manager - Mpitantana milina virtoaly dia lozisialy Red Hat fantatra amin'ny anarana hoe virt-manager, anarana izay manana ilay fonosana ao amin'ny repositories an'i Debian ihany koa. Rindrambaiko Desktop amin'ny fitantanana milina virtoaly izy io. Izy io dia ampiasaina amin'ny famoronana, fananganana ary fanitsiana ireo domains vaovao. Izy io dia manana mpanjifa VNC izay ahafahantsika miditra amin'ny console an-tsary an'ny sehatry ny vahiny. Ao amin'ny fonosana virt-manager izay entin'i Debian Jessie, tafiditra ao koa ny protokol SPICE hidirana amin'ny console graphique an'ny milina virtoaly.
Xen Izy io dia Hypervisor izay mampiasa famolavolana micro-core, ary manome ny serivisy ilaina amin'ny rafitra fikirakirana marobe mba hiasa miaraka amin'ny fitaovana solo-sainanao. izy Laboratoara informatika ao amin'ny oniversite Cambridge, namolavola ny kinova Xen voalohany, izay rindrambaiko maimaim-poana ihany koa. Debian 8 "Jessie" dia ao amin'ny repositories ny fonosana xen-hypervisor-4.4-amd64.
OpenVZ dia vahaolana virtoaly haavon'ny rafitra miasa ho an'ny Linux. Mamela anao hamorona lozisialy virtoaly mitokana, azo antoka ary tsy miankina amin'ny mpizara ara-batana iray ihany, izay manolotra fampiasana loharanom-pahalalana tsara kokoa. Izy io koa dia manome antoka fa tsy hifanipaka ireo rindranasa mihodina isaky ny mpizara. tsirairay Server tsy miankina virtoaly - Virtual Private Server (VPS), mihazakazaka mitovy tanteraka amin'ny mpizara irery. Afaka averina atsangana izy ireo ary mamela ny fidirana amin'ny root root sy ireo mpampiasa mahazatra hafa. Manana adiresy IP, fahatsiarovana, fizotrany, fisie, rindranasa, fitehirizam-boky ary rakitra fisie izy ireo.
Debian esorina kernels novaina ho an'ny OpenVZ fanohanana avy amin'ny toerana anaovany toy ny Debian 7 "Wheezy".
Linux Containers LXC
Ireo kaontenera faritra mitokana ao anatin'ny rafitra fiasa izy ireo. Ny faritra tsirairay dia samy manana ny namespace ho an'ny rafi-drakitra, tamba-jotra, PID, CPU, ary ny fizarana fahatsiarovana. Izy ireo dia azo noforonina tamin'ny alàlan'ny fampiasa Control Groups sy Namespaces tafiditra ao amin'ny kernel Linux. LXC Teknolojia mitovy amin'ny an'ny hafa mifototra amin'ny virtualization amin'ny haavon'ny kernel toy ny OpenVZ sy Linux-VServer.
vondronosy dia vahaolana amin'ny fitantanana sy fanaraha-maso ireo milina virtoaly mandeha amin'ny KVM, Xen, OpenVZ na VMware. Debian Jessie dia mampiditra azy ao amin'ny fitoeram-bokiny amin'ny alàlan'ny fonosana isan-karazany izay manondro ireo masoivohony na amin'ny ivon'ny Archipel. Raha mila fanazavana fanampiny dia tadiavo ny "archipel" amin'ny alàlan'ny Synaptic na via archipel fitadiavana haitraitra.
Rohy mahaliana hafa
Sokafy vSwitch: rindrambaiko open source mamela ny famoronana switch virtual.
Sokafy QRM: Tranokala Open Source Open Generation ho an'ny fitantanana Data Center - Data Center.
Docker: tetikasa open source afaka mandeha ho azy ny fametrahana ny rindranasa ao anaty kaontenera rindrambaiko.
nextmox: mpizara loharano misokatra ho an'ny tontolo virtoaly.
VMware- Sampana iray an'ny EMC Corporation (an'ny Dell Inc) izay manome rindrambaiko virtoaly azo alaina amin'ny solosaina X86 mifanentana
Virtualbox: rindrambaiko maimaimpoana amin'ny famoronana milina virtoaly. Debian namindra ireo fonosana mifandraika amin'ity rindrambaiko ity tamin'ny sampana «fandraisana anjara".
OpenNebula: ONE dia manitatra ny tombotsoan'ny sehatra virtualization avy amin'ny loharanon-karena ara-batana tokana mankany amin'ny banky loharanon-karena, amin'ny alàlan'ny fanaparitahana ny lohamilina, tsy amin'ny fotodrafitrasa ara-batana ihany, fa koa amin'ny toerana misy azy.
Ireo mpamaky izay naneho hatsaram-panahy tsara nandinika ny lahatsoratra hatramin'ity tsipika ity dia hahatsapa fa lehibe sy sarotra tokoa izao tontolo izao an'ny Virtualization. Manantena izahay fa ho mpitari-dalana amin'ny dianao ity.
Ankehitriny Qemu-KVM dia ao amin'ny Debian!
Tsarovy fa ity dia andian-dahatsoratra nataon'i Tambajotra informatika ho an'ny SME. Hiandry anao izahay!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Virtualization amin'ny Debian: Fampidirana - Tambajotra informatika ho an'ny SMB
Fampidirana virtualization tena tsara amin'ny ankapobeny. Misaotra tamin'ny asa nanoratana ity lahatsoratra ity. Miandry ny manaraka izahay.
Misaotra Fico tamin'ny fampidirana.
Nohazavaina tsara ary misy rohy ampy hidirana lalindalina amin'ilay lohahevitra.
Izany no tanjon'ny Mario. Heveriko fa maro no tsy mazava momba ny sakany ankehitriny amin'ny olan'ny virtualization.
Ahoana ny fomba hialana amin'ny famerana Wifi maimaim-poana
Ahoana ny fomba hamoronana Facebook Live miaraka amin'ireo kaontera fanehoan-kevitra tena izy